Ambalavao Isotry : 4’mi anjatony nampandrosoana an-trano | NewsMada
Ambalavao Isotry : 4’mi anjatony nampandrosoana an-trano
Par Taratra sur 08/02/2016
Ny alin’ny asabotsy teo, 4’mi, mpatory an-tsena, tsy manan-kialofana anjatony avy amin’ny fianakaviana 96 teny an-tsisin-dalan’Antananarivo no nanaiky hiantrano etsy amin’ny foibe fampiantranoana ny tsy manan-kialfona etsy Ambalavao Isotry.
Niandraiketan’ny minisiteran’ny mponina ny fandraisana an-tanana azy ireo tamin’izany fampiantranoina izany. Teny amin’ny tonelina Ambanidia ny fianakaviana 10 amin’izy ireo. Teny amin’ny tonelina Ambohidahy kosa ny 42 ary tetsy Behoririka ny 51 izay ahitana zaza amam-behivavy sy zokiolona.
Marihina fa nanaiky ny hanaraka ny fandalinana sy ny fitsipika hifampifehezana ao amin’ity foibe ity ireo 4’mi ireo. Anisan’izany ny fanajana ny fandriampahalemana. Manohy ny asa fanaony andavanandro ihany izy ireo rehefa maraina ny andro ary miverina mody ao amin’ny alina.
Nizarana fitaovana toy ny lamba firakotra sy kojakojan-dakozia ihany koa ireo fianakaviana sahirana vonona ny hivoatra ireo. Mpitari-posy, mpanasa lamba, mpitsimpona tavoahangy plastika eny amin’ny tobim-pako ny ankamaroan’izy ireo.
Raha ny fanisana natao, mahatratra 379 fianakaviana ireo tsy manan-kialofana eto Antananarivo. Ireo 96 ireo aloha hatramin’izao no nanaiky hiditra etsy Ambalavao Isotry mba hatory anaty trano amin’ny alina.
Betsaka ny vinavinan’asa ho an’ireo fianakaviana sahirana izay hatao ao amin’ny foibe Seba, etsy Ambalavao Isotry ho fanarenana ny fiainan’izy ireo.